Izindaba - Intambo yokuthunga ongayazi
Isikhathi esithile, izinkampani zezingubo ezifuywayo zihlangabezane “neminyango esezingeni eliphezulu” lapho zithunyelwa eYurophu, futhi nemikhiqizo ethile yezingubo zezingane iye yahlangabezana nezimangalo ezinkulu ngenxa yemicu yokuthunga engekho ezingeni elifanele. Yize intambo yokuthunga ifaka ingxenye encane yezingubo, ikhwalithi yentambo yokuthunga inomthelela omkhulu ekhwalithi yezingubo, kanti imboni yezingubo zamazwe omhlaba inezidingo eziphakeme ngokwengeziwe ngentambo yokuthunga, kepha kusenezinkampani eziningi ezingekho kakhulu ukuqonda inani elingadalwa yintambo yokuthunga. Ngalesi sizathu, intatheli evela ku- "Clothing Times" yaxoxisana noMnu Xin Zhenhai, umphathi jikelele we-Vertex Thread Industry.
Intambo yokuthunga incane bheka enkulu
"Isikhathi eside, amazwe amaningi aseYurophu abeke imigoqo eqinile kwikhwalithi yezingubo ezithunyelwa zivela eChina, futhi imikhiqizo eminingi yamabhizinisi asekhaya ibuyisiwe, okudala ukulahleka okukhulu kwezomnotho kumabhizinisi." UXin Zhenhai uthe, “Isibonelo, bekukhona izinkampani ezithunyelwa ngaphandle zezimpahla zezingane zaseDomestic ezibuyiselwa abathengi baseYurophu ngenxa yezinkinga zekhwalithi yomkhiqizo. Akekho owayengacabanga ngesizathu sokubuyela. Kwakungenxa nje yokuthi izinkomba zomzimba nezamakhemikhali zentambo yokuthunga azihlangabezananga nokujwayelekile. Intambo yokuthunga empunga itholakale iqukethe u-69.9 mg / kg ka-4-aminoazobenzene, inkampani yonakala ngenxa yezimangalo ezinkulu. ”
Abantu abaningi bayazibuza, ngabe bukhona ubudlelwano obusondele kangako phakathi kwentambo yokuthunga nekhwalithi yezingubo? UYe Guocheng wachaza: “Eqinisweni, izinkomba zomzimba nezamakhemikhali azikho ezingeni, lesi esinye sezizathu. Esinye isibonelo, enqubweni yokukhiqiza yezingubo zezingane Intambo yokuthunga esetshenzisiwe inezidingo eziqinile maqondana nokuguquguquka kwe-inthanethi. Wonke umuntu uyazi ukuthi noma ngabe kungolayini wokukhiqizwa kwezingubo zezingane noma ulayini wokukhiqiza izingubo zabantu abadala, konke kungumkhiqizi kanye nokucubungula ngemishini, futhi konke kuyimisebenzi yokukhiqiza ulayini womhlangano, kepha uma ikulayini wokukhiqiza Ikhwalithi yentambo yokuthunga esetshenziswe okulingene akuthinti kuphela ukuqina okuyisisekelo kwezingubo zezingane, kepha okubaluleke kakhulu, kuzodala ukwephuka kwenaliti yomshini wokuthunga kulayini wokukhiqiza. Le nkinga ayiqondwa ngabantu abaningi, ngisho nasezimbonini eziningi. Abantu abayinakanga kakhulu le nkinga. ”
Ngokusho kukaXin Zhenhai, intambo yokuthunga esezingeni eliphakeme esetshenziselwa ukukhiqizwa kwengubo ayidingi nje kuphela ukuthi iqine futhi ihlale isikhathi eside, kepha futhi nobuso bentambo yokuthunga kufanele bushelelezi, bungabi nezici futhi bungabi namalunga. Lapho intambo enjalo yokuthunga isetshenziswa emshinini wokuthunga wezimboni, Ngeke ixoxe inaliti yomshini wokuthunga futhi ibangele inaliti iphule. Ngokuphambene nalokho, imicu yokuthunga esezingeni eliphansi imvamisa inama-burrs namalunga, futhi izinaliti ziyagqashuka lapho zingaziwa. Uma lezi zinaliti eziphukile zingatholakali ngesikhathi, zingaxhunyaniswa nezingubo. Lokhu okwezingubo zezingane. Kuyinto eyingozi kakhulu kulabo abayigqokayo.
“Isibonelo, uma umhloli wekhwalithi ethola inaliti engaphukile engaphelele ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, kufanele athole ezinye izinaliti eziphukile ukufakazela ukuthi azikho izinsalela ezingutsheni, ukuze le nqwaba yezingubo i-Offline. Ngaphandle kwalokho, noma inaliti encane enqunyiwe ingatholakali noma ihlale ezingutsheni, ingaba nemiphumela engalindelekile. Okubaluleke kakhulu, uma isimo esifanayo sitholakala ngokuhlolwa kwekhwalithi yendawo okuthunyelwa kuyo ngaphandle, khona-ke ukubuyisela izimpahla noma inhlawulo yokujezisa enkampanini kuzodala ukulahlekelwa okukhulu kwezomnotho enkampanini. ” UXin Zhenhai uthe, “Intambo yokuthunga incane, kepha ingumcimbi omkhulu ohlobene nengqephu yezingubo ngisho nebhizinisi. Abantu baseChina bavame ukuthi, Uquqaba lubhujiswe esidlekeni sezintuthwane ', empeleni, iqiniso leli. ”
Iminyango efanelekile iphinde ikhumbuze amayunithi ezentengiselwano angaphandle kanye nabakhiqizi bezingubo ezithunyelwa kwamanye amazwe ukuthi ngezingubo ezithunyelwa e-European Union, akumele kuphela ukuthi izindwangu zingabi nodayi abavinjelwe nezinye izithako ezivinjelwe, kepha futhi ziqinise ukwenqatshelwa kwentambo yokuthunga, intambo efekethisiwe, intambo nezinye izesekeli. Ukulawulwa kodayi be-nitrogen akufanele kunganakwa ngenxa yesilinganiso esincane sezinto ezisizayo ezisetshenziswa ezingutsheni.
Umsebenzi kanye nemfashini ngasikhathi sinye
"Empeleni, hhayi izingubo zezingane kuphela, kepha izingubo eziningi manje sezinezidingo eziphakeme zokuthunga imicu, njengamajakhethi aphansi nezingubo zangaphandle ezithandwayo." UXin Zhenhai uthe, "Okwamajakhethi aphansi, enye yezinkinga ezinkulu zobuchwepheshe ukuthi ungakugwema kanjani" ukusebenzisa i-velvet "endaweni yomgodi. Ukuze sigweme le nkinga, sisebenzise ukuthuthuka okuningi kwezobuchwepheshe, njengokusetshenziswa kwezinqubo ezikhethekile ekukhiqizeni imicu yokuthunga, ukuze imicu yokuthunga ikwazi ukuthola ukuqina okukhulu nokunwebeka, ukuze kuthi ngemuva kokuthunga amajakethi ngalolu hlobo intambo yokuthunga, ingadlala umphumela wokuvuvukala, ongavimba ama-pinholes futhi ufeze umphumela wokungasebenzi phansi. Ngaphezu kwalokhu, ingaphezulu lentambo yokuthunga lengezwa nge-wax coating Craftsmanship, lokhu futhi kungagwema ukwenzeka kwe- “run velvet” ngezinga elikhulu. Ngaphezu kwalokho, ekuthungeni ezinye izindwangu ezikhethekile, njengezimpahla zangaphandle, izindwangu zama-denim, njll, kugcizelelwa namandla wentambo yokuthunga. ”
Kuyaqondakala ukuthi ezintabeni zangaphandle zokugqoka izintaba noma zokuhamba ngomkhumbi, imicu yokuthunga kumele ibe nokumelana nokugqoka okuphezulu nezakhiwo zokulwa nokuguga; maqondana nezihlalo zemoto, ngaphezu kwemisebenzi ebalulekile yokuxhuma, kudingeka ukushisa okuphezulu nokumelana ne-UV. Kwezinye izindwangu zezimboni Ngaphezulu, ikhwalithi yentambo yokuthunga ihlobene ngqo nokuphepha kwempilo yabasebenzisi.
Okwezingubo eziningi ezijwayelekile, ngokuthuthuka komkhakha wezemfashini, izingubo zihlanganise imfashini nokusebenza, futhi ukuthungwa komthungo kunethonya elikhulu kuzo zombili. Esikhathini esedlule, intambo yokuthunga njengezinto zokuxhuma izindwangu ikakhulu ibidlala indima yokuhlobisa nokuxhuma, kepha manje imicu yokuthunga nayo inendima esebenzayo. “Isibonelo, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, imicu yokuthunga idinga ukumelana nezinyembezi, ukuqina kahle, ukuqina nobumnene. Ezingutsheni ezikhethekile ezisebenzayo, kuyadingeka futhi ukuthi kungangeni manzi, kungangeni mlilo, kuqinise i-static, kulwe nemibimbi, kulwe nokuguga nezinye izidingo kungafinyelelwa ngokuqedela okukhethekile. ” UXin Zhenhai uthe.
"Ngaphezu kwale misebenzi ejwayelekile, intambo yokuthunga inomsebenzi owengeziwe: imisebenzi yokuhlobisa, njengokusetshenziswa ngqo ezindwangwini zokwengeza, noma ngqo enqubeni yokukhiqiza izindwangu, iba yingxenye ebalulekile yezindwangu zesici." UXin Zhenhai uthe, “sekuqalile. Abanye abaklami bezindwangu ze-avant-garde kanye nemikhiqizo yendwangu baqale ukuluka imicu yokuthunga enemibala ngqo ezindwangu zabo zokwakha nokukhiqiza. Lobu buchwepheshe bokucubungula okwamanje busetshenziswa kuphela kwimikhiqizo yendwangu ephezulu kakhulu. "
Kungenxa yezinzuzo zeMboni yeVeilline ezicini eziningi ukuthi izinkampani eziningi kanye nemikhiqizo bakhethe ukugcina ubudlelwane besikhathi eside bokubambisana noHuamei (izinhlobo ezihamba phambili zamasudi ebhizinisi iYoungor, Smith Barney, Yaya, njll.). Le mikhiqizo, ayigcini nje ngezidingo eziphakeme kakhulu zekhwalithi yomkhiqizo, kepha futhi idinga izinga eliphezulu lokuxhumana phakathi kwentambo yokuthunga kanye nemfashini yezingubo uqobo. Ngalo mqondo, intambo yokuthunga ayiselona iqhawe elisemaceleni, kepha kufanele futhi ibe yingcweti kwezemfashini nomgqugquzeli.